Inona no hatao aorian'ny fametrahana Elementary OS 0.2 Luna | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Elementary OS 0.2 Luna
IvanLinux | | Fisehoana / personalization
Hitako fa noraisina tsara ny lahatsoratro voalohany, hiezaka ny hanohy handefa fitaovana ilaina sy lahatsoratra mahatsikaiky hafa aho ... Fantatro fa somary tara io fa mitondra toro-hevitra ho anao ho an'ny Elementary OS 🙂
7 7. Mitadiava rindranasa bebe kokoa ao amin'ny Ivotoerana Rindrambaiko
Azo inoana fa taorian'ny famotsorana azy Elementary OS Luna ny fanavaozana vaovao dia niseho ho an'ireo fonosana samihafa natolotry ny sary ISO nozarain'ny ekipa Elementary.
Noho io antony io, rehefa vita ny fametrahana dia ampirisihina hatrany hitantana ny Vaovao farany Manager na amin'ny alàlan'ny fampandehanana ity manaraka ity avy amin'ny terminal:
Fandraisana Fanohanana ny fiteny avy amin'ny System Settings ary avy eo ianao dia afaka mampiditra ilay fiteny tianao.
Noho ny olana ara-dalàna, ny Elementary OS dia tsy afaka mampiditra amina fonosana maoderina izay, etsy ankilany, dia tena ilaina ho an'ny mpampiasa rehetra: codecs hilalao MP3, WMV na DVD misy encrypt, endritsoratra fanampiny (be mpampiasa amin'ny Windows), Flash, mpamily tompony (hampiasa tsara kokoa ny asan'ny 3D na Wi-Fi), sns.
Soa ihany fa mamela anao hametraka izany rehetra izany hatrany am-boalohany ny mpiorina Elementary OS. Tsy maintsy mamela an'io safidy io ao amin'ny iray amin'ireo efijery fametrahana ianao.
Raha tsy tsikaritr'i Ubuntu ny karanao dia azonao atao ny mametaka ny mpamily anao (nvidia na ati) foana amin'ny alàlan'ny fikarohana ilay Hardware Configuration Tool.
Ny karatra sary ATI sasany dia tsy hiara-miasa amin'ny Elementary OS raha tsy mampiasa mpamily "lova" ATI ianao ary mampihena ny mpizara X. Raha ilaina izany dia ho hitanao faingana ny antony tsy hametahan'ny Elementary OS tsara. Mba hanamboarana azy dia alefaso ireto baiko ireto:
Raha iray amin'ireo tsy afaka miaina tsy mihaino MP3, M4A ary endrika fananana hafa ianao, ary koa tsy ho tafavoaka velona amin'ity tontolo feno habibiana ity raha tsy afaka milalao ny horonan-tsarinao amin'ny MP4, WMV ary endrika manana anao hafa, misy ny vahaolana tena tsotra:
Mba hanampiana fanohanana DVD voahidy ("original rehetra") dia nanokatra terminal aho ary nitendry ireto manaraka ireto:
GetDeb (Ubuntu Click And Run taloha) dia tranokala iray anaovan'ny fonosana Deb sy ireo kinova fonosana ankehitriny izay tsy tonga ao amin'ny tahiry mahazatra ary ampiasain'ny mpampiasa farany.
Playdeb, ilay toerana fitahirizana lalao ho an'ny Ubuntu / Elemntary OS, dia noforonin'ireo olona nanome antsika getdeb.net ihany, ny tanjon'ny tetikasa dia ny hanomezana ireo mpampiasa Ubuntu trano fitehirizana tsy ofisialy miaraka amin'ireo kinova lalao farany.
Tsy ilaina izany satria afaka mampiasa ny baiko "apt-get" foana isika, fa eto kosa avelako ho an'ireo maniry:
Fametrahana: Mikaroha ao amin'ny Ivotoerana Software: aptitude. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal ...
Fametrahana: fikarohana Center Software: gdebi. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal ...
7. Mitadiava rindranasa bebe kokoa ao amin'ny Ivotoerana Rindrambaiko
Raha tsy mahita rindranasa hanao izay tianao ianao na tsy tianao ireo rindranasa tonga tampoka dia afaka mankany amin'ny Software Center ianao.
Firefox, mpizaha tranonkala (tsy tokony hamporisihako Chromium na Google Chrome)
LibreOffice, Office suite (MS Office fa maimaim-poana)
Ampio ny PPA Community Element Update
Tweaks fanabeazana fototra
Elementary Tweaks amin'ny teny fohy dia izay azonao haingoina indrindra amin'ny Elementary
Launcher tena ilaina! Atsofohy fa tsy hanenenanao izany 😉
Mametraha temotra, kisary sns ...
Fanamboarana mandroso, vokarin'ny jelly
Raha tianao dia azonao atao ny mandingana an'io na manandrama kely kokoa ary manao azy 😉
Andao hanomboka 😀
Vantany vao tafapetraka izahay dia manakatona ny session ary tsindrio ny nut ary misafidy ny Xfce Session ary manomboka ny session.
Manomboka amin'ny toerana misy anao (Miorena pantheon kely sy xfce xD)
Mametraka kwin izahay izao:
Ary raha tianao dia azonao atao ny mametraka Dolphin sy Ark (Recommended):
Ampidirintsika amin'ny Session sy Startup ny fikirakirana sy ny fananganana ao amin'ny vakizoro autostart fampiharana
Ary ampianay ireto rindranasa manaraka ireto:
- hazo fisaka
Afeninay ireo takelaka:
Manidy sy miditra izahay.
Ary ndao haingoina araka izay itiavantsika azy:
Hanova ny safidin'ny kwin:
izany no ahy 😛
Ity no feoko:
Modely: Aspire One 257
Torohevitra ho an'ny fanabeazana fototra: http://www.elementaryupdate.com/ (Anglisy)
Manantena aho fa tianao izany, aza adino ny manaraka ahy amin'ny twitter, tia, maneho hevitra ary misoratra anarana xD...
Ampidiro eto ary zahao ny lahatsoratro: http://strawpoll.me/703848
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Elementary OS 0.2 Luna
Fa maninona no toa kopian'ny & apetaka izay tokony hatao aorian'ny fametrahana ubuntu 12.04?
Ny lohateny dia mety ho copie-paste, fa ny atiny, tsia.
RoyalGNZ dia hoy izy:
ElementaryOS dia distro tsara, tena haingana sy kanto
Ho ahy manokana dia Ubuntu voafantina fotsiny fa tsy misy zavatra hafa! : /
kratoz29 dia hoy izy:
Matahotra aho fa diso tanteraka ianao, teo aloha no nampiasako ny Ubuntu (Azo antoka fa najanoko ny fampiasana azy amin'ny kinova 12.04, taorian'ny fahadisoam-panantenan'ny firaisan-kina, na dia mazava ho azy aza fa tsy manambady tontolo iainana ny olona iray, nametraka ny hafa aho) ary avy eo voatery nanao izany aho Mampiasà lap miaraka amin'ny tsy fahombiazan'ny fampisehoana, ny nahagaga ahy dia miadana be i Ubuntu amin'ny tontolo samihafa (ny firaisankina azon'ny be sy ny maro), ny fahagagako rehefa nametraka eos dia tontolo milamina sy haingana, tsy lazaina intsony fa tena tsara tarehy kokoa ny pantheon noho ny firaisankinan'ny gnome sy kde al raha mitazona ny fahatsoran'ny mpampiasa.
Mamaly an'i kratoz29
Mamaly an'i juanjp
Ianao ve mpankafy iCarly na famokarana Dan Schnneider hafa? Satria foana, amin'ireo seho hitan'izy ireo amin'ny Nick ireo dia soloin'izy ireo amin'ny paoma ny paoma.
Tsia, raha vao manomboka tsy haiko hoe iCarly na i Dan, tena fanehoan-kevitra kendrena io, na dia toa tsy toa izany aza, satria efa nisedra ny Elementary OS Luna aho, raha ny fahitana azy dia gaga aho fa rehefa hitako izy io dia nifototra tamin'ny ary ny kernel (efa lany andro) dia noheveriko fa ezahiko hatao, ho "misokatra sy ampiasaina." Ankoatr'izay, ny maha-izy azy ary tsy kopian'ny mac amin'ny fomba fihatsarambelatsihy toy ny Unity dia, raha Unity mandika ny foto-kevitry ny Mac toa ny Dock, fa amin'ny fametrahana azy eo ankavia ary manova ny endrika dia miafina tsara izy, fa ny mitovy ny hevitra sns, sns. Raha nanaitra ahy ny Elementary, satria ho ahy dia napetraka i Pear, ary amin'ny fomba mivantana rehefa miasa ny MacOSX, dia tsy Mac izany, fantatro, fa ny fampiasana no zava-dehibe, raha ny OSX rehetra dia famolavolana lehibe, ohatra ny Launchpad na expose, izay tsy fantatro hoe inona izany ary misaotra an'i Pear fantatro izao, ary izy ireo dia ilaina tokoa, ary zara raha fantatro. Talohan'ny nitadiavako birao iray hahafahana mitory filazantsara amin'ny Linux nefa tsy manao izay hahamenatra ahy (amin'ny fitondrantenan'ny GUI) satria efa hitako io.
Ankehitriny, ny Stallmantosos, ny Source Source Puritans, troll, sns dia hikapoka ahy hatoka. Sns Eny, aza manelingelina, tsy hamaly aho. Raha tsy manana zavatra ireo puritans ireo dia fahalalahana, eny, mifanohitra amin'izany fa marina izany, avelao ny hafa hisafidy, ajanony ny hatezerany rehefa tsy tianao ny zavatra iray, avelao i Ubuntu hanao ny tetikasany. Ary farany mety tsara raha miditra amin'ny Pear, Office Libre miaraka amin'ny Open Office, sns ny Elementary. Sns ary lava sns. fa tsy "fork", "merge", "merge", "merge"….
Eny, nijanona ny pearOS ...
Ok, manana rindrambaiko efa lany andro ny eOS, saingy amin'ny Linux dia tsy olana lehibe izany, indrindra izay ataoko rehefa mametraka eos dia manavao ny kernel amin'ny kinova farany indrindra, ary ilay iray miorina amin'ny Ubuntu 12.04 LTS dia tombony lehibe satria izy ireo fanavaozana ankehitriny fa tsy mila format hametrahana kinova vaovao.
Tsy apetrakao ireo mpamily tompony amd, tsy hiasa tsara izy ireo miaraka amin'ny gala, bibikely matotra io.
Araka ny voalazantsika taloha rahalahy Stallman:
Aza mividy amin'ny ATI.
Rahalahy stallman dia hilaza zavatra ratsy kokoa momba an'i nvidia XD, raha misy izany dia hiteny izy hoe mividy intel lol
Satria tsy afaka mividy solosaina finday Leemote aho dia mila miantehitra amin'ny chipset Intel (lafo ny NVIDIA ary aleoko manararaotra ny sary azo avy amin'ny processeur sy ny sary Intel).
PS: Vidio ny tabilao Gigabyte fa tsy Foxconn's.
Gigabyte, Asus na Asrock.
Ireo telo ireo dia tsy nahomby ahy mihitsy (na dia ireo maodely misy maritrano miaraka AMD aza).
Tahaka an'i Stallman nilaza an'izany !!!!!!! misaotra Andriamanitra misaotra anao fa efa manana antony semi-valid aho hamonoana azy.
Fa afaka mampiasa Kwin ianao 😉
Tsy te-ho pooper amin'ny fety aho, fa kosa mampiasa ESEWREEL ESRE? Ny andiany 25 (sampana famoahana) dia mihazakazaka toy ny ody fiaro Miaraka amin'ilay zavatra sary ATI / AMD, tena tsy dia mahatadidy aho rehefa nampiasa Windows XP sy karatra horonantsary ATI may.
Miaraka amin'ny KDE, hitako ny fiadanako tamin'ny hopping desktop. XFCE dia mahasoa toy ny KDE ihany, fa ny PC kosa no ampiasaiko miaraka amina carte graphique izay tsy mety akory amin'ny filalaovana Half-Life 1.
Ary rah any, misaotra anao nanokana fotoana hanaovana ny Elementary QT anao manokana. Andao hojerentsika raha afaka manao KDE Elementary aho.
Ny fanirianao dia baiko xDD
Hamorona lahatsoratra hatao aho: Elementary OS KDE
Raha Iceweasel dia reraka aho mandefa data any Mozilla xD (Vao tsy ela akory izay no nampiasa an'i Debian aho ary raiki-pitia tamin'i Iceweasel)
Raha ny amiko, Iceweasel dia fitiavana tamin'ny fahitana voalohany. Iceweasel dia nivadika ho ilay Firefox efa nofinofisiko hatrizay, ary manome fiadan-tsaina ahy momba ny angon-drakitra.
Ny sampana famoahana dia nanatsara be tamin'ny resaka fifanarahana amin'ireo plugins Firefox, ka mahavariana.
Raha mamoaka ny lahatsoratra izay ao anaty famerenana (ahy) izy ireo dia hahagaga anao sy ny KDE anao 😉
~~ Ivana ^ _ ^
Eny ary mbola ao anaty beta ny Elementary KDE ahy. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny dingana poloney izy io.
panchomora dia hoy izy:
Azonao atao ve ny manolotra distro izay misy fanohanana amd tsara, manana karatra miharo HD8470 aho ary miaraka amin'ny ubuntu 12.04.4 lts dia tsy manomboka ny rafitra izany rehefa manavao ny kernel ..
Mamaly an'i panchomora
Manjaro lava ny kernel 3.12 amin'ny tranon'omby izay heverina fa mitondra fanatsarana ho an'ny amd, ny kernel dia apetraka amin'ny baiko tsotra ary avy eo misafidy izay kernel tokony halefa.
efa antitra loatra ny kernel, ho an'ny karatrao dia mila mampiasa ubuntu 13.10 ianao, miaraka amin'ny 3.11.
Misaotra tamin'ny info pandev sy jomada
Ary ny Elementary OS ve tsy tokony ho an'ny mpampiasa informatika vaovao? Fa maninona ny mpampiasa vao manomboka no mila mihazona ireo baiko rehetra ireo?
Aiza ny mora?
Tsy hitako hoe sarotra ny manoratra baiko vitsivitsy 😉
Tsy hitako fa na aiza na aiza no iantsoan'izy ireo ny Elementary ho distro ho an'ireo vao manomboka amin'ny solosaina, angamba ho an'ireo vao manomboka amin'ity tontolon'ny GNU / Linux ity.
Saingy ho an'ireo vao manomboka amin'ny solosaina dia heveriko fa tsy misy distro ary tsy mila mandeha lavitra ianao, vao tsy ela akory izay dia nanao lahatsoratra tamin'ny muylinux momba ny fahasarotan'ny olona sasany ny mahita ny bokotra fampidinana Ubuntu ao amin'ny pejiny.
Ao amin'ny traikefa navelan'ny interface OSX-style. Fa raha mila zavatra tena sarotra ianao dia mamporisika anao hianatra manangana distro anao amin'ny Linux From Scratch na mampiasa Gentoo.
Tena io no halako momba ny Linux, mila mandany fotoana amin'ny fametrahana programa marobe ianao, izay maro no mety ho tafiditra ao.
Ny tiana hambara dia efa vonona hampiasa ElementaryOS. Ity ho avy taty aoriana dia raha tianao ...
@elav Marina ny anao, fa maninona ianao no mampiditra programa bebe kokoa izay tsy hahasoa ny rehetra ary hampiakatra ny lanjan'ny OS fotsiny? Heveriko fa Andriamatoa @pedro dia manana fomba fisainana diso momba ny GNU / Linux, sa tsy izany?
Misaotra naneho hevitra tamin'ny lahatsoratro elav!
Izany fankahalana izany dia mifototra amin'ny tsy fanananao traikefa sy tsy fahalalanao (toa ny ankamaroan'ny fankahalana rehetra) .Raha mila zavatra rehetra ilainao aho dia ampidino ny openSUSE, DVD feno (4.7) dia apetrakao tanteraka izy io ary miahiahy aho fa misy zavatra tsy ampy aminao.
@Staff Ha ny tiako holazaina dia «4.7» GB vitsivitsy, marina? xD
Misaotra naneho hevitra tamin'ny lahatsoratro Staff!
Debian DVD1, azafady!
Na ny Debian Wheezy DVD1. Tsy misy tsara noho izany.
Meh, raha tsy mila Aorian'ny fametrahana toy izany ianao dia aleoko manolotra anao hametraka Rosiana Fedora Remix, izay fork an'ny Fedora izay ilainao fa tsy mila manao After Install.
Lol, eo am-baravarankely dia iray ihany, fa raha ny vlc, fa raha ny iTunes, izay raha ny biraon'ny microsoft, izay raha ny codecs an'ny sy izany, raha ny antivirus ...
Soa ihany antivirus amin'ny linux tsy ee
Mitovy ihany izy io, saingy ao amin'ny Linux ny ankamaroan'izy ireo dia efa tonga ao amin'ny repos, tsy mijery eo anelanelan'ny Softonic sy ny karazan'io karazana io.
Rehefa nanana windows sy linux aho dia tsy nahita ny terminal xD
Miarahaba anao ary misaotra anao nanome hevitra cookie!
Tsy misy tsara noho ny terminal. Na ny prompt momba ny baiko Windows aza tsy manakaiky ny voditongotrao.
Eo anelanelan'ny tendron'i Softonic sy ny repo ofisialy dia miankina amin'ny repos aho.
[Acme] dia hoy izy:
Efa ela aho no nampiasa OS fanabeazana fototra saingy manana olana kely amin'izany aho rehefa mampiasa solosaina finday tapaka amin'ny charger dia lasa tsy milamina sy miadana ary angamba satria somary antitra ny bateria ary tsy manome fampisehoana tsara indrindra.
Mihevitra ny hividy solosaina finday vaovao aho, tiako ny miaraka amin'ny efijery 11.6 ″ sy processeur i3 na i5. Iza amin'ireo no arosonao ???
Angamba tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitr'ilay lahatsoratra io fanontaniana io fa toy ny amin'ny hafatra sasany miresaka momba an'i Lemote sy momba ny fitaovana finday, izany no antony nanapahako hevitra fa hanao izany.
Mamaly an'i [Acme]
Efa nanandrana nametraka jupiter ve ianao? ka farafaharatsiny mba ho fantatrao raha 100 ny processeur-nao, eny, alao hamboarinao mba hamonjy bateria na hampiakarana fampisehoana.
mrCh0 dia hoy izy:
ELementary OS no distro tiako indrindra hatramin'izao. Tsy misy afa-tsy amin'ny singa fototra, ary manapa-kevitra ianao hoe inona no hapetraka eo amboniny. Mahatalanjona ny endrika, tsy hitako manokana ny ilana fametrahana tontolo sary hafa.
Saika ny zava-drehetra nataoko tamin'ny alàlan'ny ivon-toeran'ny rindrambaiko tamin'ny zavatra novakiako tao amin'ny elementupdate.com, nanararaotra ny fahitako fomba iray hametrahana ny bokotra kely indrindra sy hampitomboana toy ny ao amin'ny Windows.
Midori (tafiditra ao anaty tranokala) dia mitongilana isan'andro, noho izany dia nametraka Chrome aho (izay ampiarahako mifampitohy ny angon-drakitra ato amiko .. .. saingy tsy manome soso-kevitra ilay lahatsoratra Misy antony ve sa tsy misy hafa amin'ilay faniriana madio atoronao an'i Firefox?
Mamaly an'i mrCh0
Satria avy amin'ny Google ¬_¬ ary iza no mahalala izay azon'ny Google atao, dia tsara kokoa ny anolorako an'i Iceweasel
Na Chromium (tsy miditra amin'ny GMail anao, mazava ho azy). Opera dia efa nanary ny fanohanany ny GNU / Linux (tsy azo ampiasaina ho an'ny penguin ny kinova ankehitriny, koa tazomiko ho fahatsiarovana ny Opera 12.16 mandra-panamboarany kinova vaovao ho an'ny GNU / Linux ary miaraka amin'ny Opera Link).
Ary raha mandoka Firefox amin'ny motera blink isika ary manao azy io ho Free Software! ok ok, tena faly aho xD
Amin'izao fotoana izao, ny zavatra akaiky azy indrindra dia Qupzilla, saingy hitako fa nahafaty ny vokany.
Mampiasa Iceweasel sy Firefox bebe kokoa noho ny Chromium / Chrome aho. Ny olana dia tsy i Google ihany, fa amin'ny fametrahana an'i Chromium / Chrome amin'ny Debian, mety tsy dia hitanao tsara ireo horonan-tsary HTML5 sy horonan-tsary Flash sasany (raha tsy hainao ny manamboatra ny fanaingoana hanitsiana ireo lesoka ireo) .
Tena tsara, ny biraonao dia toa tsara, na dia nanandrana Elementary OS tao amin'ny USB Live aza aho ary nieritreritra ny hametraka izany eo am-pofoako satria tsy naharesy lahatra ahy na dia tsara tarehy aza izy lol, amin'ny alàlan'ny famolavolana dia apetrako tsara kokoa ny Pear OS ary raha marina izany momba ny rindranasa, ny fikirakirana ary ny hafa hisorohana ireo dingana ireo tsara kokoa ny fametrahana Linux Mint.
Ny zavatra tsy tiako momba ny Pear OS sy L-Mint dia ny fananan'izy ireo Adobe Flash Player
Romer dia hoy izy:
Manana olana amin'ny fametrahana Elementar OS aho. Ny efijery dia toa "pixelated" tsy azoko hazavaina tsara, misy dian-kapoka fotsy eraky ny efijery. Milamina sy mandeha tsara ny OS, ny olana tokana ananako dia izany. Misy sosokevitra ve?
Valiny tamin'i Romer
Luis Siller dia hoy izy:
Salama namana misaotra ny lahatsoratra, hey te hanontany anao aho hoe maninona rehefa apetrakao ny OS dia tsy manana wifi aho, hitanao, ny mpamily ahy dia Ralink RT3290 802.11bgn Adapter Wi-Fi, tsy vaovao aho amin'ny linux, manana aho efa an-taonany no nampiasa azy io ary toa ahy tsara io fizarana io, mangataka aminao aho azafady mba ampio aho hamaha ny olako, misaotra betsaka mialoha. Etsy andaniny, tsara ny fampidinana sy usb, tsy olana amin'ny iso izany, satria tamin'ny solosaina hafa no nampiasako azy tsy nisy olana, nanandrana 32 sy 64 aza aho.
Valiny tamin'i Siller Siller
Efa nanandrana nametraka ny kernel vaovao mifandraika amin'ny ethernet ve ianao?
tsy milamina intsony ny repositories playdeb sy getdeb. Nijanona fanavaozana vetivety io tetikasa io izao dia miteraka olana. aza apetraka
Salama, tiako manokana ny ElementaryOS, fa manana olana roa aho; ny iray, tsy afaka mamindra ny windows aho amin'ny alàlan'ny alt + click (efa zatra an'io aho), ary roa, maninona aho no tsy afaka mametraka sary masina sy lahatahiry eo amin'ny birao? ary ahoana no anaovako azy?
Valio i Yair
RosVel dia hoy izy:
Mamaly an'i RosVel
Sambany nametraka fanabeazana fototra aho ary nahasarika ny saiko fa rehefa tsindrio ny bokotra totozy ankavanana dia tsy nanao na inona na inona, mahazatra anao manome safidy anao hamoronana rakitra vaovao, lahatahiry sns,
mahazatra izany amin'ny fanabeazana fototra?
Inona no azoko atao mba hanomezana azy ireo fiasa tsy haiko momba anao fa mahatsapa hafahafa aho toa ny fandaniam-bokotra fotsiny hehe
voltax dia hoy izy:
Izaho koa dia antsasaky ny vaovao amin'ity raharaha ity, ary tahaka ny olon-drehetra dia tiako ny mandehandeha mametraka ny tanako sy mianatra.
Ity fanahianao ity dia ahy ihany koa, toy ny amin'ny pantheon mihitsy dia tsy azo atao ny mamela ny biraonao, farafaharatsiny nahatratra izany fehin-kevitra izany aho taorian'ny andro nitadiavana zavatra. Nahita fomba azo ivoahana eto aho. http://www.hongkiat.com/blog/elementary-os-luna-tips/
Tsy inona izany fa tsy ny tsy inona fa ny miara-mihazakazaka Nautilus ka mitantana ny birao. Izy io dia miasa ary azonao atao ny mametraka ny lohahevitra ambaratonga voalohany, na dia tsy mitovy tanteraka aza izany.
Raha mahalala zavatra tsara kokoa ianao dia omeo hevitra izany. Tsara ny distro ary mahamenatra ny hahavery azy amin'ny lafiny iray.
Valiny amin'ny voltax
Misaotra ny valiny, noho ny antony ara-pitaovan'ny fantsom-boaloboka dia mila manala sy mametraka xubuntu aho saingy mieritreritra fatratra ny hahazo pc natokana ho an'ny eOS, ary ny fampahalalana ho anao dia hanampy ahy be 😀
Azon'ny olona atao ve ny manolotra marika, maodely laptop tena mifanaraka amin'ny eOS, amin'ny tranokala ofisialin'izy ireo an'i Luna miaraka amin'ny lenovo, inona araka ny eritreritrao no misy marika hafa mifanentana aminy, nefa tsy misy ny tsy fahombiazan'ny horonan-tsary, ny fahamendrehana ary ny fampisehoana azy?
Ny lenovo amin'ny ankapobeny dia be vidiny, ary raha misy marika hafa mitovy na tsara kokoa amin'ny eO dia tiako ho fantatra izany.
Manana Hp g42 amd dual core aho saingy efa antitra izy io noho ny fampiasana ary mafana be izy io, ankoatr'izay nisy lesoka rehefa nampiasa ireo hotcorn eOS dia nanjavozavo ireo zana-tsary kely. Izany no antony hividianako vaovao.
Misaotra mialoha 😀
fres dia hoy izy:
Ry namako dia efa nametraka fanabeazana fototra os luna fa ny olana dia miadana loatra izy. Toa hafahafa be amiko ny fomba hanamarinako fa tsy diso zavatra aho. Sambany nametraka ny Linux aho.
Mamaly an'i fres
DAiana dia hoy izy:
Salama olona! Vao tsy ela akory izay no nametraka ny EOS tao anaty fanamarihako ary manana olana aho, manana fahitalavitra Samsung mifandray amin'ny hdmi aho ary fantany izany fa mampiseho ahy ny fahitalavitra hoe "tsy mahazo signal" izy io, sendra olona ve izany?
Valiny tamin'i DAiana
G'Macedo dia hoy izy:
Salama, androany vao nametraka ny Elementary OS aho ary manana izao fanontaniana manaraka izao aho:
Mampiasa mpanara-maso roa aho (HDMI sy VGA) ny olana dia rehefa avy nametraka ny teny miafiko aho ary nanindry enter, dia lasa mainty ny iray tamin'ireo efijery ary ny iray fotsy….
Mampiasa karatra sary ASUS RADEON HD 6570 aho.
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, Misaotra.
Valiny amin'i G'Macedo
Federico Pereyra dia hoy izy:
Tsy afaka milalao mp3 aho, nanaraka izay nolazainao aho ary nanipy ahy ilay hafatra «tsy ampidirina ny mpampitohy GStreamer», na izany aza dia havaozina ny rafitra ankehitriny, fa raha sanatria misy zavatra hafa dia avelako ho anao ny fanontaniana, tena tsara ny info, misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Federico Pereyra
Vao nametraka OS ELEMENATARY aho ary koa ireo fonosana rehetra atolotray. Koa satria vaovao amin'ny linux aho dia manontany anao aho.
ahoana no ahafahako mametraka apetraka, lahatahiry, fisie sns .. eo amin'ny birao. Mamela ahy eo ambony seranana fotsiny izy io.
wewewe dia hoy izy:
ary rehefa avy nokapohina mafy dia namely anao ny galarda tamin'ny fahadimy ambin'ny folo ho valim-pitia amin'ny dia lavitra.
Mamaly an'i wewewe
Ahoana no hamahana ny olana tsy hitan'ny OS ao amin'ny solosaina findainy HP ny karatra tambajotra WIFI, toa tapaka izany. Inona ny codec hapetraka? Misaotra anao
Federico Gustavoo Pereyra dia hoy izy:
Vahaolana azo atao dia ny mampifandray ny pc amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny Ethernet ary manome fanavaozana ny mpamily, ka ireo eo amin'ny board wifi dia apetraka ho azy, andramo izany ary raha tsy mandeha izany dia afaka mahita vahaolana hafa isika, saingy ity no ho tsotra indrindra. mahafaly
Valiny tamin'i Federico Gustavoo Pereyra
Tompondakan'i Ortiz dia hoy izy:
Manana olana mitovy amin'izany aho isaky ny manavao ny eOS. Voavahaiko tamim-pahamendrehana ny fametrahana / fampidirana adapter wi-fi amin'ny alàlan'ny usb ... avy eo amin'ny safidin'ny rafitra no tadiaviko ny kisary misy ny mpamily fanampiny ary avelao izy hamantatra azy ireo ary aorian'izay vao hampavitrika. Ho an'ity dia ilaina ny fifandraisana Internet satria tsy manana ethernet aho ka izany no antony ampiasako ny adapter ivelany. Aorian'izay dia afaka mifandray aho, na dia manana olana amin'ny fifandraisana aza aho indraindray. Broadcom ny karako. eOS dia rafitra tsara. Talohan'ny nampiasako ny Pear OS x ary tsikaritro fa nanana olana maro koa izy io, na dia tsy manam-pahaizana manokana aza aho dia te hiezaka hamaha zavatra nefa tsy mampiasa terminal. Mampiasa ny netbook-ko ho mpizara Internet hitsapana rafitra loharano misokatra (http://clavius.tij.uia.mx) ary napetrako saika ny tsiro rehetra amin'ny Ubuntu sy eOS izay tsy tiako nefa tena mahazo aina aho amin'ity distro ity.
Valiny amin'i Adalid Ortiz
Salama, misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao, nanapa-kevitra ny hiala kely amin'ny Windows aho (antenaiko tokoa) ary nisafidy ny Elementary ho hany rafitra. Hatreto dia mandeha tsara ny zava-drehetra afa-tsy ny fifandraisako wifi dia tapaka tsy tapaka ary mahasosotra loatra izany. Ampio aho hanitsy izany azafady. Voalohany indrindra, Misaotra.!
Manana solosaina finday Acer V5 aho. Intel Core i3.
robertp dia hoy izy:
Fanontaniana iray, ahoana no hametrahako ny mpamily ho an'ny antenaon'ny wifi? Tsy afaka mifandray amin'ny Internet aho
Mamaly an'i robertp
Cotu dia hoy izy:
Salama, nanandrana nametraka ireo varavarankely toy ny jelly aho ary tsy hitako ny fampiasa ny mpampiasa tamin'ny mode xfce, hoy ianao hoe mankanesa any amin'ny configure fa tsy hitako na aiza na aiza, ahoana no ahatongavako an'io varavarankely io?
Mamaly an'i Cotu
HI, lahatsoratra tsara, saingy manana olana amin'ny windows jelly aho. Hita fa tsy hitako ilay menio izay Session sy starup satria tsy hitako izay haleha rehefa mandeha any amin'ny configurement ianao, afaka manampy ahy ve ianao?
Salama, teboka marobe, sioka fanabeazana fototra milaza amiko fa tsy eo io, na tsy hamela ahy hametraka azy. Eo ihany koa ny fanontaniana amin'ny fidirana amin'ny Session sy ny mpampiasa. Satria tsy mety amiko ny fanaingoana ankapobeny, mila manao na mametraka zavatra ve aho?
ampio aho fa tena te-hametraka windows jelly aho
Misaotra tamin'ny famoahana fa tena vaovao amin'ny fanabeazana fototra aho ary tsy dia mahalala momba Linux. Tiako raha misy olona mahita an'ity lahatsoratra ity hanampy ahy hahafantatra bebe kokoa momba ny rafitra fiasa. na zavatra tena hankasitrahana.
AlonsoRoco dia hoy izy:
Tiako ity OS ity, misaotra an'ity fidirana ity. Isaky ny misy zavatra vita apetraka dia tsara ny manana tolo-kevitry ny manam-pahaizana. Mihobia!
Mamaly an'i AlonsoRoco
Luis Villalobos dia hoy izy:
Salama, tiako ny manohy mampiasa ny Elementary OS, raha mbola afaka mametraka rindranasa tsy misy fifandraisana Internet aho, misy olona afaka miteny amiko ny fomba hanaovana an'io asa io?
Valiny tamin'i Luis Villalobos
Firefox OS 1.1: amin'ny antsipiriany sy amin'ny ho avy